२०७५ फागुन १७ गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक
एमबिबिएस चिकित्सक नहुँदा पर्साको ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित
ओमप्रकाश चौधरी/धर्मेन्द्र चौरसिया, १६ फागुन/ सरकारले स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना र एमबिबिएस डाक्टरको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पर्साको ग्रामीण क्ष्Fेत्रमा डाक्टरहरू पुग्न सकेका छैनन्। पर्साको १४ वटा स्थानीय तहमध्ये नारायणी उपक्ष्Fेत्रीय अस्पताल, वीरगंज र जिल्ला अस्पताल, पोखरियाबाहेक २ नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिका अहिलेसम्म डाक्टरविहीन छन् । स्थानीय तहको दुई नपा र १० गापामा अहिले पनि स्वास्थ्य चौकीहरू एचए र सिएमको भरमा चलिरहेका छन् । एमबिबिएस डाक्टर सरकारले खटनपटन गरेर नपठाएको कारण ग्रामीण क्ष्Fेत्रका बासिन्दा सामान्य उपचारको लागि पनि पोखरिया, वीरगंज धाउन बाध्य छन् । जिल्ला अस्पताल पोखरियामा ६ जना चिकित्सक छन् तर त्यहाँ सबैखाले उपचार नगरिने हुनाले ग्रामीण क्षेत्रका बिरामीहरू वीरगंज आउने गरेका छन् । कतिपय बिरामी सीमावर्ती भारतको इनर्वा, भंगाहा जाने गरेका छन् । ठोरी गापाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन लामाले गापामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्थापन भइसकेको तर सो सञ्चालनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एमबिबिएस चिकित
पानीले दलहन खेती प्रभावित
प्रस, पोखरिया, १६ फागुन/ मङ्गलवारदेखि आज बिहानसम्म परेको पानीले पर्सामा लगाइएको दलहन खेती प्रभावित भएको छ । पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाका कृषि संयोजक उपेन्द्र महतोले मसुरी, खेसारीलगायतको दलहन खेतीलाई पानीले क्षति गरेको बताए । उनले मसुरी र खेसारीलगायत दलहन खेती यसपटक पानीको कारण २० प्रतिशत उत्पादन कम हुने बताए । मसुरी र खेसारीको पूmल पानीले नोक्सान भएकोले उत्पादनमा ह्रास आउने उनले बताए । पानीको कारण गहुँ र तोरी खेती चाहिं फस्टाउने भएको छ । यस अघि परेको पानीले दलहन, तेलहन र गहुँबालीको लागि फलदायी भएको थियो । किसानहरूले पानी परेपछि त्यतिखेर मल छर्ने काम गरेका थिए । आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने किसानहरूको लागि यसपटक समय–समयमा परेको पानीले फाइदा पुग्ने संयोजक महतोको भनाइ छ ।
ब्रह्माकुमारीको आयोजनामा रक्तदान तथा नेत्र परीक्षण
प्रस, वीरगंज, १६ फागुन/ ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र वीरगंजले महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा आज रक्तदान एवं निश्शुल्क नेत्र परीक्षण शिविर गरेको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि सांसद् प्रदीप यादवले ब्रह्माकुमारी संस्थाद्वारा सिकाइने आध्यात्मिक एवं संयमशील जीवनशैलीको सकारात्मक प्रभाव समाजमा पर्ने बताए । उनले रक्तदान र निश्शुल्क आँखा परीक्षण शिविरजस्तो निकै प्रेरणादायी र सामाजिक सेवा गरेकोमा आभार प्रकट गरे । सेवा केन्द्रकी मुख्य सञ्चालिका ब्रह्माकुमारी रबिना दिदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्साकी कावा अध्यक्ष्F मधु राणा, समाजसेवी सुनील खेतान, सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश थारू, फोटो पत्रकार महासङ्घका प्रदेश संयोजक राम सर्राफलगायतले मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रममा ब्रह्माकुमारी बेलीले स्वागत र सहजीकरण ब्रह्माकुमार गोकुल गुभाजूले गरेका थिए । यसैबीच महाशिवरात्रिको अवसरमा ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र विश्वदर्शन भवन छपकैयामा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा १० महिलासहित ३५ जनाले रक्तदान गरेको रक्तसञ्चार केन्द्र वीरगंजका प्रमुख सौरभराज पाण्डे
पाइपलाइन ओछ्याउन निकुञ्जको रूख कटान शुरु
प्रस पथलैया, १६ फागुन/ बहुप्रतीक्षित अमलेखगंज–मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका लागि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रभित्रको रूख कटान शुरु भएको छ । बाराको पथलैयादेखि अमलेखगंजसम्मको नौ किलोमिटर निकुञ्ज क्षेत्रको रूख कटान नहुँदा पाइपलाइन विस्तारको काम रोकिएको थियो । रूख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले अनुमति दिएलगत्तै विधिवत् पूजा गरी कटान शुरू भएको हो । परियोजनाका लागि ६ हजार ५ सय ६३ ठूला र ८१ हजार ६ सय साना लाथ्रा कटान हुने पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना प्रमुख प्रदिप यादवले जानकारी दिए । निकुञ्जले जेठसम्म रूख कटानको समय दिएको भए पनि एक महीनाभित्रै सबै काम सम्पन्न गरी वैशाखमैं पाइपलाइनबाट इन्धन भिœयाउने आयोजना कार्यालयको लक्ष्य छ । नेपाल आयल निगम, अमलेखगंजका डिपो प्रमुख प्रदिप यादवले रूख कटानको कामसँगै पाइप बिछ्याउने काम अघि बढाइने हुँदा एक महीनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । रूख कटानका लागि हेटौंडाको निशा सप्लायर्सले एक करोड ४७ लाखमा ठेक्का सकारेको छ । भारतको ३२ किलोमिटर र नेपालको ३९ किलोमिटर गरी आयोजनाको लम्बाइ ६९ किल
वीरगंजमा पञ्जाबी भाङडा
प्रस, परवानीपुर, १६ फागुन/ भारतको संस्कृति मन्त्रालय र नेपालस्थित भारतीय दूतावासको संयुक्त आयोजनामा वीरगंजमा पञ्जाबी लोकनृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो । बुधवार राति वीरगंज नगर सभागृहमा बेलुका ६ बजेदेखि ८ बजेसम्म चलेको कार्यक्रमको उद्घाटन प्रदेश नं २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल र विशिष्ट अतिथि पर्सा क्षेत्र नं १ का सासद प्रदिप यादवले दिप प्रज्वलन गरी गरेका थिए । वीरगंजका विभिन्न क्षेत्रका सहभागी रहेको कार्यक्रममा भारतका हरिन्दर पाल समूहका कलाकारहरूले पञ्जाबी लोकनृत्य प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रम वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका निमित्त कन्सुल जेनरल रमेश चतुर्वेदीको सभापतित्वमा भएको थियो ।
काठमाडौंको प्रदशर्नीको लागि वीरगंजका उद्योगीसँग छलफल
प्रस, परवानीपुर, १६ फागुन/ नेपाल फोटो पत्रकार महासङ्घ (एफएनपिजे)ले आज वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ । अप्रिल ११ देखि १३ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने दोस्रो अन्तर्राष्टिय ‘प्रिंटिङ, फोटोग्राफी तथा मिडिया टेक्नोलोजी प्रदर्शनी’ को सम्बन्धमा छलफल भएको हो । सङ्घको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल फोटो पत्रकार महासङ्घका महासचिव हरि रेग्मीले वीरगंजका व्यवसायीहरूलाई प्रदर्शनीबारे जानकारी गराएका थिए । प्रदर्शनीमा देशभरिबाट फोटो पत्रकारहरूले पठाएको करीब २०० फोटो, छपाइ उद्योगको लागि आवश्यक प्रविधि तथा मेशिन एवं विभिन्न छपाइका सामानपनि राखिने बताइएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष ध्रुव आलेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ता, माधव राजपाल, मनोजदासलगायतको सहभागिता थियो ।
वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडक वर्षायाम नजिकिंदै जाँदा ठोरीका जनतामा चिन्ता
प्रस, ठोरी, १६ फागुन/ वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडकखण्ड अन्तर्गत चमरीहोलदेखि चौतारा (ठोरी) झन्डै ३० किलोमिटर सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण यस वर्षपनि यहाँका बासिन्दाले वर्षायाममा ठूलै समस्या झेल्नुपर्ने देखिएको छ । अघिल्लो वर्षायाममा हुलाकी सडक हिलाम्य हुँदा सदरमुकाम वीरगंजसँग यस क्षेत्रको सडक सम्पर्क लामो समयसम्म विच्छेद भएको थियो । सडक हिलाम्य भएर एम्बुलेन्ससमेत सञ्चालनमा आउन नसक्दा स्थानीयले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको थियो । सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार कम्पनीले चमरीहोलदेखि ठोरी ठुटेखोलाको किनारासम्म २४ किलोमिटर सडक फराकिलो पारी निर्माण गरिरहेको भएपनि सडकमा माटो भर्ने, सम्याउने तथा ग्रेभलिङ कार्यले गति नलिंदा विगतझैं समस्या झेल्नुपर्ने देखिएको छ । कालिका बानियाँ जेभी कन्सट्रक्शनले सेढवादेखि ठुटेखोला किनारसम्म सडक फराकिलो पार्ने काम गरिसकेको छ । तर सडक फराकिलो पारिएको सबै स्थानमा माटो फिलिङ हुन सकेको छैन । माटो फिलिङ गरिएको क्षेत्रमा पनि ग्रेभलिङ पूरा भएको छैन । चमरीहोलदेखि ठोरी चौतारासम्म ६७ वटा कल्भर्ट बनाउनुपर्ने भएपनि सातवटा कल्भर्टमात्र बनेको छ । २४ वटा कल
समृद्धिका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना
शीतल महतो गरीबी निवारणको सबैभन्दा सशक्त औजारको रूपमा सामाजिक सुरक्षालाई लिइने गरिन्छ । गरीबीका सबै स्वरूपलाई सम्बोधन गर्ने हुनाले यसलाई सबैभन्दा सशक्त अस्त्रको रूपमा लिइने गरिएको हो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले आयगत गरीबी मात्र होइन, असमानता हटाउन र सामाजिक समावेशीकरण बढाउनपनि ठूलो योगदान दिन्छ । यसका साथै मानवीय पूँजी बढाउन, भोकमरी कम गर्न र खाद्य सुरक्षा कायम गर्नसमेत यसले महŒवपूर्ण योगदान गर्छ । रोजगार प्रवद्र्धन गरी समग्रमा समावेशी आर्थिक विकास एवं समृृद्धि हासिल गर्नसमेत यसको भूमिका महŒवपूर्ण रहेको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले अहिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको छ । यो योजना शुरू गर्दा सरकारको तयारी भव्य देखिएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले त्यस अनुसारको सक्रियता देखाएको छैन । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको तस्बिरसहित नयाँ युगको शुरूआतका रूपमा यसलाई लिइएको थियो । मजदूर कर्मचारीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने दाबी गरिएको यो कार्यक्रमलाई उद्योग प्रतिष्ठानले समेत स्वागत गरेका हुन् । यो योजना अन्तर्गत श्रम ऐन लागू भएको संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा योगदान
मुनाफाप्रति हाम्रो दृष्टिकोण के सही छ ?
विश्वराज अधिकारी पश्चिमको व्यापार पद्धति र पूर्वको व्यापार पद्धतिबीच अहिलेपनि ठूलो अन्तर छ । व्यापारको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न पश्चिमका व्यापारीहरू धेरै अगडि छन् । पश्चिमा व्यापारीहरूले प्रत्येक वर्ष नयाँनयाँ किसिमका व्यापारको सृजना गर्दछन् भने पूर्वका व्यापारीहरू परम्परागत चलिआएको व्यापार गर्न वा पश्चिमा व्यापारीहरूले गरेका व्यापार पद्धतिको नक्कल गर्नमा केन्द्रित रहेको देखिन्छन् । पूर्वका व्यापारीले आप्mनै बलमा कुनै नयाँ व्यापार सृजना वा विकास गरेको एउटा पनि उदाहरण छैन । फेसबूक, ट्विटर, गुगल, अमेजन, उबर, युटुबजस्ता व्यापारका नयाँ पद्धतिहरू पश्चिममा नै जन्मेका हुन् । अहिले संसारलाई नै एउटा सानो गाउँमा परिणत गर्ने ‘इन्टरनेट’को जन्मपनि पश्चिममा नै भएको थियो । यसरी पश्चिमका व्यापारीहरू व्यापारको क्षेत्रमा सदैव अगाडि छन् । पश्चिमका व्यापारी धनलाई ज्ञान वा परिश्रमको पारितोषिक मान्छन् । धन प्राप्त गर्नका लागि बल एवं बुद्धिको भरपूर उपयोग गर्छन् । त्यसकारण पश्चिमी जगत्मा भन्ने गरिन्छ ‘मुनाफा भनेको जोखिम वहनको परिणाम हो’ (एचयाष्त ष्क चभधबचम या चष्कप दभबचष्लन) । तर पूर्वका व्य
वीरगंज किन हुन सक्दैन ?
श्रीमन्नारायण देश र प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न, मधेस आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको, सर्वाधिक शहादत दिएको तथा ठूलो आर्थिक क्षति भोगेको व्यापारिक नगरी वीरगंजलाई प्रदेश नं. २ को राजधानी किन बनाउन सकिंदैन ? वीरगंजले देशका राजनीतिक दलहरूलाई मान, सम्मान, दाम सबै दिएको छ । तर प्रत्युत्तरमा वीरगंजलाई केही पनि प्राप्त भएको छैन । वीरगंज र नेपालका राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दा यस रूपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ कि ‘वीरगंज पुगेर त्यहाँबाट के–के ल्याउन सकिन्छ ? तथा वीरगंजबाट भेट्न आउनेलाई ‘तपाईंले के–के लिएर आउनु भएको छ ?’ भन्ने प्रश्न सोध्ने गरिन्छ । अर्थात् देशका राजनीतिक दलहरू वीरगंजलाई केही दिने होइन, वीरगंजबाट सधैं केही न केही लिने मनसाय मात्रै राखेका देखिन्छन् । अब वीरगंजले पनि देशका राजनीतिक दलहरूसित केही माग्ने साहस जुटाउन सक्नुपर्दछ । वीरगंजभन्दा पनि भौतिक पूर्वाधारले कमजोर मानिएका ठाउँहरू बुटवल, धनगढी, हेटौडा, पोखराहरू प्रादेशिक राजधानी बनिसकेका छन् यस्तो अवस्थामा वीरगंजसित मात्रै अन्याय किन ? जनकपुरलाई धार्मिक र पर
विषाक्त ताल र श्रीसिया
रूसको विषाक्त ताल जुन ८० वर्ष पहिलेसम्म लाल सेनाको वनभोज स्थलको रूपमा लोकप्रिय थियो । उनीहरू त्यहाँ जल सयर गर्थे । माछा समाउथे, नाच्थे–गाउँथे निर्धक्क रमाउँथे । शहरभन्दा टाढा, पोखरी आसपास पर्यटकीय बस्तीको शुरूवात हुँदै थियो । आज त्यही स्थान श्मशान, भुताहा तालको नामले चिनिन्छ । तालको नजीक कोही जाँदैन । अन्जानवश जाने प्राणी जीवित रहने सम्भावना कम छ । रमणीय स्थल हेर्दा जोपनि आकर्षित हुन्छ । भए छ के भने रमणीय ताल नजीक ‘द मयङ्क प्रोडक्शन’ ले न्युक्लियर प्लान्ट स्थापना गरेछ । सो प्लान्टबाट विसर्जित रसायन उसले त्यसै तालमा विसर्जन गर्दोरहेछ । ताल प्रदूषित हुँदै गयो । पानी शुद्धीकरण गर्ने जलचर र वनस्पति नाश भए । ताल केवल विषको कुण्डमा परिणत भयो । आसपासको बस्तीमा महामारी फैलेसरह मानिस मर्न थाले । धेरैपछि सरकारलाई थाहा भयो ‘ताल विषाक्त बनेको रहेछ ।’ सरकारले सन् २००३ मा न्युक्लियर प्लान्ट बन्द गराइदिएको छ । तर तालको शुद्धीकरण सरकारको क्षमताभन्दा बाहिर छ । वीरगंजको मुटु भएर बग्ने श्रीसिया नदी आजभन्दा चार दशक पहिले पवित्र श्रीसिया नदी थियो । बाराको राम वनबाट शुरू भएको श्रीसिया वीरगंजको मात्र
२०७५ फागुन १६ गते बिहीवारको प्रतीक दैनिक
एशियान ओपेन विजेता कराँते खेलाडी प्रदेश सरकारद्वारा सम्मानित
प्रस, वीरगंज, १५ फागुन/ एशियन ओपेन कराँते प्रतियोगितामा विजयी प्रदेश नं.२ का खेलाडीहरूलाई प्रदेश सरकारले सम्मान गरेको छ । नेपाल शिन क्योकुशिन कराँते सङ्घ प्रदेश नं.२ ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबूराउत गद्दीले विजयी खेलाडीहरूलाई सम्मान गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री राउतले क्युकोशिन कराँतेको विकासका लागि प्रदेश सरकारको तर्पmबाट चार लाख रुपियाँ अनुदान सहयोगबापतको चेक कराँते सङ्घका प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार महतोलाई हस्तान्तरण गरे । सो अवसरमा मुख्यमन्त्रीले तेस्रो मुलुकका खेलाडीहरू सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पदक हासिल गरेर प्रदेश नं. २ को प्रतिष्ठा बढाएको भन्दै विजयी खेलाडीहरूको प्रशंसा गरे । जीवनको महŒवपूर्ण समय खेलकूद क्षेत्रमा बिताएर समाज र राष्ट्रको नाम उचो पार्न भूमिका निर्वाह गरेका खेलाडीहरूको जीवन निर्वाहका लागि रोजगारको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताए । केन्द्र सरकारले यसबारे ठोस कदम नचालेको आरोप लगउँदै प्रदेश सरकार खेलाडीको भावना अनुरूप योजना, नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने बताए । “यस पटक सम्मानस्वरूप सानो सहयोगमात्र हो । खेलाडी त
वीरगंज र पोखरियाका चिकित्सक आन्दोलित, आकस्मिक सेवाबाहेक सबै सेवा ठप्प
प्रस, वीरगंज, १५ फागुन/ सरकारी चिकित्सक सङ्घ (गोदान) को आह्वानमा आज वीरगंजस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका चिकित्सकहरूले पनि आकस्मिकबाहेक सबै सेवा ठप्प पारे । कर्मचारी समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारलाई दिएको ७२ घण्टे अल्टिमेटम हिजो सकिएपछि माग पूरा नगरेको विरोधमा सरकारी चिकित्सक सङ्घ (गोदान) ले आज देशभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक सबै चिकित्सा सेवा ठप्प राख्न आह्वान गरेको थियो । आन्दोलनका कारण नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत सरकारी चिकित्सकले भने आकस्मिक कक्षमा बिरामीहरूलाई सेवा प्रदान गरेका थिए । बहिरङ्ग विभाग बन्द गरिएको र टाढा–टाढाबाट बिरामीहरू आएको कारण त्यस्ता बिरामीमध्ये परीक्षण अत्यावश्यक भएकालाई आकस्मिक कक्षबाट चिकित्सकहरूले सेवा प्रदान गरेका थिए । डा. राकेश झाले सबै युनिटका चिकित्सकहरूले आकस्मिक कक्षबाट बिरामीलाई सेवा प्रदान गरेको बताए । सरकारको विरोधमा आन्दोलन गरिएको र बिरामीलाई दिनुपर्ने अत्यावश्यक सेवा पनि पूरा गरिएको उनले बताए । उनले अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरूको नियमित परीक्षण गरिएको तर नयाँ बिरामी भर्ना भने नगरिएको बताए । पोखरिया
हरियो तरकारी यस वर्ष लामो समयसम्म सस्तियो
मीना बजार कम्प्लेक्समा तरकारी बेच्दै व्यापारी । तस्वीरः प्रतीक प्रस, वीरगंज, १५ फागुन/ यस वर्ष वीरगंजमा हरियो तरकारीको मूल्य गत वर्षको तुलनामा लामो समयसम्म सस्तो रह्यो । हरियो तरकारीको लागि आत्मनिर्भर हुन नसकेको पर्सा जिल्ला अहिलेसम्म भारत र छिमेकी बारा, मकवानपुर, धादिङबाट आउने हरियो तरकारीमा निर्भर रहेको छ । हरियो तरकारी यस वर्ष गत वर्षको तुलना लामो समयसम्म सस्तो भएको तरकारी तथा फलपूmल व्यावसायी सङ्घ पर्साका पूर्वसचिव ग्यासुमियाँ देवानले बताए । गत वर्षहरूमा चाडपर्व–दशैं, तिहार, छठमा महँगो हुने हरियो तरकारी यस वर्ष सस्तोमा बिक्री भयो । पर्सा र बारामा पर्याप्त मात्रामा हरियो तरकारीको उत्पादन भएकोले सस्तो भएको उनले बताए । यस वर्ष काउली (कोभी) खुद्रा रु १०/– सम्म बिक्री भयो भने बन्दाकोभी रु ५/– मा । गोलभेडा रु १५/–, कोसा रु २५/–, भन्टा रु १५/– मा बिक्री भएको थियो । वीरगंजमा अहिलेसम्म हरियो तरकारीको मोल खासै बढेको छैन । तर अब बिस्तारै बढने क्रममा छ । आजको थोक दाम यसप्रकार छ ः– काउली रु १०/–, बन्दाकोभी रु ६/–, गोलभेडा रु २०/–, कोसा रु ३५/–, भन्टा रु २५/– । अहिले सिजनको तरकार
समुदाय प्रहरी साझेदारी आँखा शिविर सम्पन्न
कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै । तस्वीर सौजन्यः लालुमाया गुरुङ प्रस, वीरगंज, १५ फागुन/ समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत निश्शुल्क आँखा जाँच शिविर सम्पन्न भयो । सामुदायिक सेवा केन्द्र, श्रीपुर र वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरको संयोजन एवं माट्रिका आइ फाउन्डेशन वीरगंजको सहयोगमा सम्पन्न शिविरमा ३९० जनाको आँखा परीक्षण गरिएको थियो । तीमध्ये १५ जनामा मोतियाबिन्दु फेला परेको आइ फाउन्डेशनले जनाएको छ । उनीहरूको निश्शुल्क शल्यक्रिया गर्ने फाउन्डेशनका डाइरेक्टर महेशसिंह धामीले बताए । डा. धामीको नेतृत्वमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको टोलीले आँखा परीक्षण गरेको थियो । वडा अध्यक्ष प्रद्युम्न सेढाईको अध्यक्षता र ट्रफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजकुमार सिंहको प्रमुख आतिथ्य रहेको र मुख्य अतिथि तथा सामुदायिक सेवा केन्द्रकी रेखा घिमिरेको आँखा परीक्षण गरी शिविरको शुभारम्भ भएको थियो । अल्पाइन मावि परिसरमा आयोजित शिविरको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रतीक दैनिकका प्रधान सम्पादक जगदीशप्रसाद शर्मा, प्रहरी निरीक्षक चक्राबहादुर मल्ल, व्यवस्थित वीरगंज अभियानका संयोजक दिलीपराज कार्क
विकासको लागि शासन प्रणालीमा सुधार चाहिन्छ –मुख्यमन्त्री
प्रस वीरगज, १५ फागुन/ नेपालमा अहिलेसम्म पात्र परिर्वतन भए, सङ्घीयता आयो तर शासन प्रणाली परिर्वतन नभएसम्म कुनै प्रदेशको विकास नहुने प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबू रातउतले बताएका छन् । विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागको सहयोगमा ‘मधेसको अविकास र सडक सञ्जाल’बारे एक दिने सेमिनारको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले नेपालमा सङ्घीयता आएपनि शासन प्रणाली पुरानै रहेको प्रदेशको विकास गर्न समय लाग्ने बताए । सडक बनाएर विकास हुँदैन, सडकले विनाशपनि हुन्छ, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई अलि ददिणतिर बनाएको भए हुलाकी राजमार्ग आश्वयक नै थिएन उनको भनाइ थियो । नेपालमा सडकको नाउँमा वनजङ्गल खेतीयोग्य जग्गा मासिनुभन्दा कनेक्टिभिटी सडक निर्माणको अवधारण ल्याएको भए मधेशको विकास पहिले नै भइसक्थ्यो मुख्यमन्त्री राउतले भने । अन्य प्रदेश मात्र होइन, कर्णाली प्रदेशको तुलनामा पनि प्रदेश २ पछाडि रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउनुको सट्टा परनिर्भर बनाउँदा विकास हुन नसकेको बताए । उनले जनतामध्येपनि मधेसको जनतालाई फसाएर, अल्झाएर परनि
मोतीहारी–अमलेखगंज पाइपलाइन बिछ्याउने काम अन्तिम चरणमा
गम्भीरा सहनी, जीतपुर, १५ फागुन/ मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । मोतिहारीदेखि रक्सौलसम्म पाइपलाइन बिछ्याउने काम छिटपुट बाँकी छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले मोतीहारीदेखि रक्सौलसम्म ३०.२ किलोमिटर क्षेत्रमा जमीनमुनि पाइप बिछ्याउने काम सकिएको बताए । मोतीहारी–रक्सौल ३३.७ किलोमिटर सडकमा पाइपलाइन बिछ्याउने योजना छ । अब सो ठाउँमा ३.५ किलोमिटर मात्र पाइपलाइन बिछ्याउन बाँकी छ । यसैगरी नेपालतर्फ रक्सौलदेखि अमलेखगंजसम्म ३९.२ किलोमिटरमध्ये अब नौ किलोमिटर मात्र बाँकी रहेको निगमका प्रवक्ता गोइतले बताए । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको पथलैयादेखि अमलेखगंजसम्म नौ किलोमिटर जङ्गल क्षेत्रमा मात्र पाइपलाइन बिछ्याउने काम बाँकी छ । निकुञ्जको वनक्षेत्रको रूख कटानको समस्या रहेकोले बाँकी रहेको सो क्षेत्रमा रूख कटान पूरा भएकोले केही दिनभित्रै रूख काट्ने काम शुरू गरिने प्रवक्ता गोइतले बताए ।
आगलागी पीडितलाई प्रदेश सरकारबाट राहत
प्रस, वीरगंज, १५ फागुन/ गत छठपर्वको बेला ग्याँस सिलिन्डर विस्फोट भएर परिवारका सदस्य गुमाएका वीरगंज श्रीपुर निवासी हीरालाल महतोलाई प्रदेश सरकारले राहतस्वरूप एक लाख रुपियाँ प्रदान गरेको छ । बुधवार श्रीपुर मावि परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबूराउत गद्दी, सङ्घीयसभाका सांसद प्रदिप यादव, प्रदेश सांसद प्रह्लाद गिरीलगायतले पीडित महतोलाई राहत सहयोगस्वरूप चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । ग्याँस सिलिन्डर विस्फोटबाट महतोकी बुहारीको ज्यान गएको थियो भने छोरा घाइते छन् । आगलागीबाट महतोको घरसमेत जलेर नष्ट भएको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका संयोजक सलाउद्दिन अहमदले जानकारी दिए ।
महिला विश्वकप एशियाली छनोट क्रिकेट प्रतियोगिता, नेपालले कुवेतलाई ३० रन अन्तरले पराजित ग¥यो
प्रस, वीरगंज, १५ फागुन/ महिला विश्वकपका लागि एशियाली छनोटको अन्तिम खेलमा आज नेपालले कुवेतलाई हराएको छ । नेपालले कुवेतलाई ३० रन अन्तरले पराजित गरेको हो । थाइल्यान्डको बैंककस्थित एशियन इन्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी मैदानमा टस हारेर पहिलो ब्याटिड्ढो निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित २० ओभरको खेलमा ७ विकेट गुमाएर ११६ रन बनाएको थियो । नेपालले दिएको ११७ रनको चुनौती पछ्याउने क्रममा कुवेत ९ विकेटको क्षतिमा ८६ रनमा सीमित भयो । नेपालको ओपनर सीता रानामगर खाता नखोली आउट भइन् भने अर्की ओपनर काजल श्रेष्ठले १८ रन बनाइन् । इन्दु वर्मा र रोमा थापाले समान ७ रन बनाए भने सरिता मगर शून्यमा आउट भइन् । नेरी थापाले १९ रन बनाइन् भने कप्तान रूबिना क्षत्रीले २२ रन बनाइन् । बिन्दु रावल सर्वाधिक २८ रन बनाएर नटआउट रहिन् । बलिङतर्फ कुवेतकी मार्यम ओमर र प्रियादा मुरलीले २–२ विकेट लिए । लक्ष्य पछ्याउने क्रममा कुवेतले राम्रो शुरूआत गर्दै एक विकेटको नोक्सानमा ६३ रन बनाएको थियो । पछि रन रेट उकास्न नसक्दा दबाबमा परेको कुवेतले ठूलो सट खेल्ने चक्करमा लगातार विकेट गुमायो र प्रतियोगिताको अन्तिम खेलमा पनि पराजय नै भोग्यो
तेक्वान्डो खेलाडी पुरस्कृत
प्रस, वीरगंज, १५ फागुन/ प्रथम वीरगंज इन्डो नेपाल तेक्वान्दो प्रतियोगितामा स्वर्ण, रजत र कांस्य पदक जितेका प्रदेश नं. २ का खेलाडीहरूलाई शालिमार सिमेन्टले पुरस्कृत गरेको छ । शालिमार सिमेन्टका प्रबन्ध सञ्चालक अशोक बैदले नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ प्रदेश नं २ का अध्यक्ष राजेशमान सिंहलाई पुरस्कारबापतको रकम उपलब्ध गराएका हुन् । शालिमार सिमेन्टले प्रथम वीरगंज इन्डो नेपाल तेक्वान्दो प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक विजेता धर्मराज प्रजापति र सुदीप नेपालीलाई जनही रु ५ हजार प्रदान गरेको थियो । त्यसैगरी रजत पदक विजेता ओसामा हवारी, मुन्ना तामाङ र कांस्य पदक विजेता विमला तामाङलाई जनही रु ३ हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरेको थियो । घोषणा गरेको रकम प्रदेश अध्यक्ष सिंहलाई बैदले हस्तान्तरण गरेको र सो रकम अध्यक्ष सिंहले आज विजयी खेलाडीहरूलाई वितरण गरेका थिए । पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा सङ्घका प्रदेश सदस्यहरू प्रेमबाबू पटेल, उमेश सहनी, जयप्रकाश प्रशिक्षकद्वय विजय शाह र नाजिर हुसेन सहभागी थिए ।
नवदलितको उत्साह र पुराना दलितको आक्रोश
सञ्जय साह मित्र सरकारले गत साउन केही थप जातिलाई दलितको श्रेणीमा राखेको थियो । अधिकांशले सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका थिए । सरकारले दलितलाई सुविधा दिने भएकोले धेरैले स्वागत गरेका हुन् तर सरकारले दलितको श्रेणीमा राखेर घोषणा गर्नु अघि कतिपयलाई जानकारी नभएकोले घोषणा भएपछि वा अरू कोहीबाट जानकारी प्राप्त गरेपछि आक्रोश व्यक्त गरे । समाजले दलित भनेर हेप्ने डरले वा पहिलेदेखि दलितलाई हेप्ने गरेकोले आक्रोश पोखेको दलित घोषणा गरिएपछि खुशी हुने पक्षको प्रतिक्रिया थियो । दलित हुनु राम्रो कि नराम्रो भन्ने विभाजित मनोविज्ञानबीच अप्रत्यक्षरूपमैं भएपनि नवदलितहरूले सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । नेपालको वर्तमान संरचना र संविधानले दलितलाई विशेष अधिकार दिएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा र स्थानीय सरकारमा दलितको सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । हरेक वडामा जनप्रतिनिधिको रूपमा अनिवार्य निर्वाचित हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । वडा सदस्यमा कम्तीमा एकजना दलित हुनुपर्ने व्यवस्थाले नीति निर्माण तहमा दलितको पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ । यसले दलितलाई निकै फाइदा पु¥याएको छ । दलित समुदाय यसबाट लाभान्वित भएको
महिलामैत्री बन्दै देश
साँच्ची भन्ने हो भने नेपालमा सबैभन्दा बढी चासो र सजगता कुनै क्ष्Fेत्रमा देखा परेको छ त्यो हो, महिला । हुनत शुरू प्रजातन्त्रकालदेखि नै रूढिवादी नेपाली समाजले बाह्य क्ष्Fेत्रमा महिला सहभागितालाई मान्यता दिन थालेको हो, तर आप्mनो परिवारबाट कोही अघि नसरोस्, अरू बढ्छ भने हौस्याउन पछि नपर्ने मानसिकताका साथ । यो संस्कारगत अस्वीकृतिबीच स्वीकृतिसूचक मनोविज्ञान थियो । पञ्चायतकालमा त्यस अवस्थामा केही सुधार त भयो तर सोचमा खासै परिवर्तन आएन । महिलालाई सार्वजनिक र पुरुष सरह गतिविधिमा सामेल गराउने परिपाटीले त्यस बेला फराकिलो आयाम पायो जब राजधानीमा कल गर्लहरूलाई छानीछानी प्रहरीमा भर्ना गर्न थालियो । किनभने त्यस बेला के मान्यता थियो भने उच्छृङ्खल महिलामात्रका लागि घरबाहिरको गतिविधि सह्य छ । वा ती परिवारका महिला जो उच्च शिक्ष्Fित, धाक–रवाफयुक्त, जसको क्रियाकलापलाई मन नपराएपनि प्रत्यक्ष्F आलोचना गर्न सकिंदैनथ्यो, उनीहरू विभिन्न क्ष्Fेत्रमा, खासगरी राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा देखा पर्दथे । मध्यम वर्गीय परिवारका त तुरुन्त लाञ्छना लगाउन सबै तँछाडमछाड नै गर्दथे । दोस्रो प्रजातन्त्रको आगमनपछि यस अवस्
२०७५ फागुन १५ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक
सातवटा ऐन सार्वजनिक गर्दै मौलापुरमा छात्रालाई ल्यापटप कार्यक्रम शुभारम्भ
प्रस, गरुडा, १४ फागुन/ महिला प्रमुख रहेको प्रदेश २ को एकमात्र नगरपालिका मौलापुरले महिलामैत्री विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । माध्यमिक तहमा अध्ययनरत छात्रालाई समयमा विद्यालय आउनजान मौलापुरले शुरू गरेको साइकल उपहार कार्यक्रम अहिले जिल्लाव्यापी भएको छ । यसै क्रममा मौलापुर नगरपालिकाले कक्षा ११ मा अध्ययनरत छात्रालाई ल्यापटप दिने कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ । नियमित कक्षामा हाजिर हुने कक्षा ११ का पचासजना छात्रालाई नगरपालिकाको तर्फबाट डिजिटल साक्षरता बढाउन तथा बालिकाको सम्मान र स्वाभिमान वृद्धि गर्न ल्यापटप कार्यक्रम ल्याइएको नगर प्रमुख रिनादेवी साहले बताएकी छन् । मौलापुर नगरपालिकाभित्र घर भई स्थानीय पथराबुधराम मावि र सोनरनिया माविमा नियमित कक्षामा उपस्थित हुने पचास छात्रालाई पहिलो चरणमा ल्यापटप प्रदान गरिएको नगरप्रमुख साहले बताइन् । ल्यापटप पाएपछि घरै कम्प्युटर साक्षर हुने विश्वास व्यक्त गर्दै छात्राहरूले नगरपालिकाले प्रशंसनीय काम गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस अघि नगरपालिका र सांसद प्रभु साहको पहलमा नगरपालिकाको सबै घरलाई धूवाँमुक्त बनाउन एलपी ग्याँससहित
विनाटेन्डर करोडौंको औषधी खरिद, तर स्वास्थ्य चौकीमा औषधी छैन
प्रस, वीरगज, १४ फागुन/ पर्साका इलाका हेल्थपोस्ट, प्रहरी चौकी तथा प्रFथमिक उपचार केन्द्रमा अहिले औषधी अभाव कायम रहेको पाइएको छ । औषधी नहुँदा बिरामीहरू समस्यामा पर्नुका साथै कर्मचारीपनि समस्यामा पर्ने गरेका छन् । सेवाग्रहीलाई उपचारपछि औषधी नदिंदा गाली खानुपर्ने इलाका हेल्थपोस्ट लगङ्गीका शनिकुमार साहको भनाइ छ । इलाका हेल्थपोस्टबाट ३९ किसिमको औषधी निश्शुल्क वितरण गर्ने नेपाल सरकारको निर्देशन छ । तर यहाँ १४ किसिमको औषधी नभएको दुई महीना भयो–इन्चार्ज साहको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको असोजमा गाउँपालिकाले एकपटक औषधी दिएको थियो । त्यसको ६ महीना बितिसक्दापनि औषधी पठाएको छैन । पठाएको औषधीमा म्याद सिद्धिन लागेको औषधी बढी रहेको साहको भनाइ छ । गापाले पठाएको औषधीमध्ये अधिकांश औषधी म्याद सकिने अवस्थामा रहेकोले वितरण नगरी रोकिएको छ । यस विषयमा स्वास्थ्य संयोजक भरत चौधरीले औषधी खरिद भइसकेको तर स्टोर इन्चार्ज बाहिर भएकोले वितरण हुन नसकेको बताए । भोलिदेखि नै औषधी वितरण हुने जानकारी दिए । गापा अध्यक्ष सुरेशप्रसाद कुर्मीले भने औषधी भएको बेला सम्पर्क नगरेको कारण समस्या आएको ब
महानगरपालिकाले निकास थुनेपछि सर्वसाधारणलाई मर्का
प्रस, वीरगंज, १४ फागुन/ वीरगंज महानगरपालिकाले वडा नं ४ भगवती राइसमिलको विवादित जग्गामा माटो पुरेर आसपासका मानिसहरूको निकास थुनिदिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको करीब सवा बिघा जग्गामा ताराचन्द्र केडिया, शरद विक्रम शाहसमेतले सर्वाेच्च अदालतमा आप्mनो हकदाबी गर्दै मुद्दा दिएको जग्गाको अदालतबाट झिनोफानो नहुँदै वीरगंज महानगरपालिकाले टिपरद्वारा माटो पुर्ने काम गरेको थियो । इनरबाइपासको पश्चिमतर्फको जग्गामा महानगरपालिकाले माटो पुर्ने काम गरेकोमा सर्वाेच्चको आदेशमा माटो पुर्ने काम रोकिएको थियो । माटो पुर्ने क्रममा सडकदेखि पश्चिमतर्फको कच्ची ५ फिटको नाला पुरिएको छ । करिब ३ महीनादेखी माटो पुर्ने काम गरेको महानगरपालिकाको कारण अहिले कच्ची नाला पुरिएर सो क्षेत्र पोखरीमा परिणत हुँदैछ । नालाको बहाव थुनिएपछि आसपासका क्षेत्र पोखरीमा परिणत हुनुको साथै नालाको फोहर पानीले दुर्गन्ध फैलाएको स्थानीयले बताएका छन् । सरसफाइतर्फ महानगरपालिका सचेत हुनुपर्नेमा उल्टो नालाको मुहान थुनेर दुर्गन्धलाई बढावा दिएको भन्दै स्थानीयले महानगरपालिकाका मेयर, प्रमुख प्रशा
आतङ्कवादविरुद्ध राजपाद्वारा मोटरसाइकल जुलूस
प्रस, वीरगंज, १४ फागुन/ भारत कश्मीरको पुलवामामा भएको आतङ्की हमलाको विरोधमा मङ्गलवार वीरगंजमा राजपाले विरोध गर्दै मोटरसाइकल जुलूस निकालेको छ । पुलवामामा भएको हमलाको विरोधमा आज बिहान भारतले पाकिस्तानमा गरेको हमलाको दिन पारेर राजपा नेपालको भ्रातृ सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ, पर्सा र राष्ट्रिय विद्यार्थी सङ्घ पर्साले ‘आतङ्कवादविरुद्ध लडाइँमा भारत हामी तिम्रो साथमा छौं’ भन्ने नारा लगाउँदै वीरगंजमा मोटरसाइकल जुलूस निकालेका हुन् । सयौंको सङ्ख्यामा सो पार्टीका नेता कार्यकर्ता विपी उद्यानस्थित लालबङ्गला परिसरबाट मोटरसाइकल जुलूस निकालेर नगरको विभिन्न क्षेत्र परिक्रमा गर्दै घण्टाघर चोकमा कोणसभा गरेका थियो । कोणसभामा महासचिव राजेशमान सिंहले आतङ्कवादको कुनै जात, धर्म नहुने बताए । उनले भने–आतङ्कवादले विश्वलाई अशान्त पारेकोले भारतको पुलवामामा भएको आतङ्की हमलाको कडा विरोध गर्दछौं । मोटरसाइकल जुलूसमा राजपा नेपाल पर्साका अध्यक्ष प्रेमबाबू पटेल, सचिव उमेशलाल सहनी, केन्द्रीय सदस्य मीनु ठाकुर, बरकतुल नेशा, डा.कमरूल अंसारी, राधिका देवी, सङ्गीता दास, खैरूद्दीन मियाँ, मदनप्रसाद यादव, ब
फोटो पत्रकार महासङ्घको प्रदेश संयोजकमा सर्राफ
प्रस, वीरगंज, १४ फागुन/ नेपाल फोटो पत्रकार महासङ्घको प्रदेश नम्बर २ को संयोजकमा फोटो पत्रकार राम सर्राफ चयन भएका छन् । आज जनकपुरमा भएको महासङ्घको प्रदेशस्तरीय भेलाले सर्राफलाई संयोजकमा सर्वसम्मत चयन गरेको हो । प्रदेश नम्बर २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल, नेपाल फोटो पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ध्रुव आले, नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रदेश संयोजक दीपेन्द्र चौहानलगायतको सहभागितामा सम्पन्न घोषणासभामा सर्राफ सर्वसम्मत चयन भएका हुन् । सर्राफ फोटो पत्रकार महासङ्घको पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन । यसैगरी प्रदेश सहसंयोजक पङ्कज श्रेष्ठ, सचिव फणि महत, सहसचिव गणेश साह, कोषाध्यक्ष दिवाकर भण्डारी सर्वसम्मत चयन भएका छन । संयोजकमा चयन भएपछि सर्राफले फोटो पत्रकारहरूको पेशागत हकहितका लागि सधैं सक्रिय रहने बताए । फोटो पत्रकारहरूको पेशागत चुनौती समाधान र प्रवद्र्धनका लागि सरोकारका निकाय र पक्षसित अधिकतम पहल र प्रयास गर्ने उनले प्रतिबद्धता जाहेर गरे । सर्वसम्मत चयन भएका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई बधाई दिंदै मन्त्री सोनलले कार्यकाल सफलताको कामना गरेका थिए ।
रौतहटमा स्कूल बस र ट्रक ठोकिंदा एघारजना घाइते
प्रस, गरुडा, १४ फागुन/ रौतहट, गरुडामा एउटा स्कूलबस र ट्रक ठोकिएर एघारजना घाइते भएका छन् । घाइतेमा छजना विद्यार्थी, दुईजना शिक्षक, दुईजना चालक र एकजना महिला प्रहरी छन् । घाइतेमध्ये चारजनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । रौतहटको गरुडा–४ गरुडास्थित नेपाल पुलिस स्कूलबाट विद्यार्थी र शिक्षक बोकेर गरुडा–८ जिंगडिया होस्टलतर्फ जाँदै गरेको बा १ ग २१७९ नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट उखु बोकेर गरुडास्थित श्री राम सुगर मिल्सतर्फ उखु बोकेर आइरहेको ना ३ ख ७४१८ ट्रक गरुडा–८ सिवानी पेट्रोल पम्प, जिंगडिया नजीक ठोकिएका थिए । घटनामा विद्यार्थीहरू आयात सिंह, युवराज पटेल, कृतिका रञ्जन, सौगात सारू, आर्यन रस्तोगी र कैलरिन राई घाइते भएका छन् । यसैगरी शिक्षिकाद्वय निरूपा कार्की र ईश्वरी थापा पनि घाइते छन् । बसमैं रहेका प्रहरी जवान विष्णुमाया स्याङ्तान पनि घाइते भएकी छन् । घटनामा बसका चालक डम्बर विक र ट्रकका चालक निजगढ निवासी प्रह्लाद थपलियापनि घाइते भएका छन् । घाइतेको उपचार गरुडामा भइरहेको छ । घाइतेमध्ये चारजनालाई नारायणघाट पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले ज
दलितको घरविहीनताको अवस्था चाँडै समाप्त हुन्छ –मन्त्री सोनल
प्रस, जनकपुरधाम, १४ फागुन/ प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश नं. २ का दलित समुदाय अब घरविहीन अवस्थामा रहनु नपर्ने बताएका छन् । मङ्गलवार जनकपुरमा आयोजित ‘दलित आवास कार्यक्रमसम्बन्धी छलफल’ कार्यक्रममा मन्त्री सोनलले सो कुरा बताएका हुन् । दलित आवास योजनाको प्रदेश २ अन्तर्गत आठवटै जिल्लाका जिल्ला संयोजकसहित पदाधिकारीहरू, भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख लगायत सो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित पक्ष सहभागी छलफल कार्यक्रममा उनले काम छिटोछरितो र गुणस्तरीय गर्न निर्देशन दिए । जनता आवस कार्यक्रममा विगतमा निकै गडबडी भएको टिप्पणी गर्दै मन्त्री सोनलले दलित आवासमा त्यस्तो क्रियाकलाप नदोह¥याउन चेतावनी दिए । घरबारविहीन दलितहरूको आवास बनाउने कार्यमा पनि गडबडी गर्नेले स्वर्गमा पनि ठाउँ नपाउने भन्दै मन्त्री सोनलले सजग र सचेत रहन अपील गरे । दलित आवास योजनाको प्रथम चरणमा डोम, हलखोर, मेस्तर र मुसहर जातिको मात्रै घर बनाउने योजना रहेको र यसै योजना अन्तर्गत यी चार जातिको घरविहीनताको अवस्था समाप्त हुने उनले बताए । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री डिम्पल
विषादिरहित कृषि उत्पादन
सुदर्शनराज हावा, पानी, माटो, प्रदूषणका कारण विश्व नै विषादिमय बन्दै गइरहेको छ । मानिसहरूका दैनिक गतिविधिले व्यापक रूपमा प्रकृतिको दोहन भइरहेको छ । सबै कुरा अप्राकृतिक हुँदैछ । प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण सुन्दर देश नेपालमा योजनाबद्ध विकास र उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रकृतिमाथि नै चुनौती आइलागेको छ । मानिसले प्रयोग गरिरहेको प्लास्टिकले शहर बजारलाई नै कुरूप बनाइरहेको छ । अन्नबाली, तरकारी, फलपूmल सबैमा विषादिको प्रयोगले गर्दा वातावरण नै विषादिमय बनिरहेको छ । खेतीपाती जोगाउन विषादि अनिवार्य भइसकेको छ । खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्दा रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको अति प्रयोगले मानिस, पशुपक्षीको स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिग्रँदै गइरहेको छ । रोगी मानिस नभएको कुनै घर पाइँदैन । खानपानकै कारण नानाथरिका रोगबाट मानिस ग्रसित भइरहेका छन् । विषादिरहित कृषि उत्पादन र स्वच्छ वातावरण भएन भने मानिस रोगबाट मुक्त हुन सक्दैन । अन्नबाली, बोटबिरूवाको लागि चाहिने खाद्य तŒव विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । जसमध्ये प्राङ्गारिक तथा रासायनिक मल मुख्य हो । हिजोआज कृषिप्रधान देश भनिएको नेपालमा गाई, भैंसी
विचारमा सुधार आवश्यक
मानिसलाई बाँधेर राख्न सकिन्न । यस कारण पनि कि उसलाई बाँधेर राखिदिंदा उसले काम गर्न सक्दैन, वा ऊसँग काम लिन सकिंदैन । मानिसलाई तह लगाउन कि निषेधात्मक उपाय अङ्गीकार गर्नुपर्छ कि परामर्श । निषेधात्मक उपाय भनेको उसले आप्mनो दायित्वभन्दा पर जान नपाउने नियम लागू गर्नु हो । एउटा पशुको उच्छृङ्खलतामा प्रतिबन्ध लगाउन निषेधात्मक उपायमध्ये उसलाई बाँध्नु हो । तर मानिसलाई यसरी तबमात्र बाँध्न सकिन्छ, जब उसको गलत क्रियाकलापले समाजलाई नराम्रो असर पार्न थाल्छ र निषेधको अर्को बाटो रहँदैन । जेल यस्तै ठाउँ हो । जहाँ मानिसको गलत क्रियाकलापमा रोक लगाउन सकिन्छ । तर त्यहाँपनि अति उद्दण्ड र कसैगरी वशमा नआउने व्यक्तिलाई साङ्लोमा बाँधिन्छ । उच्छृङ्खलताको हद बढेर पशुत्वसम्म पुगेको मानिस समाजको लागि सर्वथा अयोग्य ठानेर उसको गतिविधिमा नियन्त्रण गर्नु नै विकल्प बाँकी रहन्छ । दोस्रो उपाय हो परामर्श । यो मानिसका लागि उपयुक्त उपाय हो । परामर्श अर्थात् उसलाई उसको कर्तव्याकर्तव्य बोध गराउनु । कहिलेकाहीं मानिसले नबुझेर पनि कर्तव्यप्रति हेलचेक्र्याइँ गरेको हुन्छ । हामीकहाँ सबैभन्दा आदरणीय पेशा भनेको शिक्ष्Fा दिनु ह
२०७५ फागुन १४ गते मङ्गलवारको प्रतीक दैनिक
प्रदेशस्तरीय छनोटका लागि वीरगंज हक्की टिम जनकपुर प्रस्थान
प्रस, परवानीपुर, १३ फागुन/ नेपालगंजमा चैत मसान्तमा हुने आठौं राष्ट्रिय खेलकूदको तयारीको क्रममा प्रदेश २ स्तरीय छनोट प्रतियोगितको लागि वीरगंज हक्की टिम आज जनकपुर प्रस्थान गरेको छ । हक्की टिमका कप्तान हरबिन्दर सिंहको नेतृत्वमा १९ सदस्य खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको टिम जनकपुर प्रस्थान गरेको हो । टिमलाई वीरगंजवासीका नागरिक तथा श्रीगुरु नानक सेवा प्रतिष्ठान शोधकेन्द्र वीरगंजले शुभकामना दिंदै बिदाइ गरेको हक्कीका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी सरदार जसपाल सिंहले जानकारी गराए । सो अवसरमा हक्कीका पूर्व खेलाडीहरू मुरारी रौनियार, कमल अग्रवाल, माधव राजपाललगायतको सहभागिता थियो । वीरगंज टिमको छनोट खेल जनकपुर टिमसँग मङ्गलवार हुने कार्यक्रम छ ।
पोखरियामा प्रभावकारी भएन ई–हाजिरी
धर्मेन्द्र चौरसिया, १३ फागुन/ पोखरिया नगरपालिका, अस्पताल तथा जिल्ला उच्चाङ्गल माविमा जडान गरिएको ई–हाजिरी प्रभावहीन देखिएको छ । कर्मचारीहरू हाजिर गरेर भाग्ने गरेको कारण पोखरिया नगरपालिकाले एक वर्ष पहिले ई–हाजिरी जडान गरेको थियो । तर जडान भएको एक–दुई महीनापछि नै ई–हाजिरी बिगार्ने काम भयो र अहिलेसम्म बनाइएको छैन । ई–हाजिरी जडान भएपछि कमसे कम बिहान र साँझ अनिवार्य हाजिर गर्न जानैपर्ने भएकोले कर्मचारीहरूले नै ई–हाजिरी बिगारेका थिए । ई–हाजिरी मेशिन बिग्रेको एक वर्ष बित्न थाल्दापनि मरम्मत भएको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज थापाले आपूm आउनुपूर्व ई–हाजिरी बिग्रेको र रजिस्टरबाट हाजिर गर्ने काम भइरहेको बताए । उनले ई–हाजिरी बनाएर सञ्चालन गर्ने तत्काल कुनै योजना नरहेको प्रस्ट्याए । रजिस्टरबाट हाजिर भइरहेकोले ई–हाजिरीतर्फ ध्यानै नगएको थापाको भनाइ छ । जिल्ला अस्पतालमा जडान भएको ई–हाजिरी पनि बिग्रेको छ । मेसु डा. अनिल यादवले पनि आपूm आउनु अगावै ई–हाजिरी मेशिन बिग्रेको बताए । उनले अस्पतालमा चिकित्सक, प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारी सबैले अहिले रजिस्टरमा हाजिरी गर्ने गरेको बताए । उ